Daawo Sawirada Muqdisho oo laga hirgaliyay Dhismooyin qurux badan iyo Caasimada oo xiligan laga dheehanayo isbadal Wanaagsan - iftineducation.com
iftineducation.com – Tani ma ahan Muqdishidii lagu bartay dagaalada, dilka, dhaca iyo nidaam la’aanta, hada waa caasimadii Soomaaliya oo dhamaan waxyaabihii lagu tilmaami jiray bari ka noqotay.
Dib u dhis ballaaran ayaa ka socda, dhismooyin hor leh oo indhaha soo jiidanaaya ayaa kusoo kordhay, kuwo kalena dhismo ayaa ku socda, waxaana magaalada laga dareemayaa isbadal muuqda oo sanadaha soo socda ka dhigi doona caasimad la mid ah kuwa dalalka geeska Afrika ugu quruxda badan.
Kala duwan shalay iyo maanta, hadii shalay indhahaagu qabanayeen guryo ku burburay madaafiic aan loo meel dayin, maanta indhahaagu ma qabanayaan guryo ay reebeen raadadkii dagaalada, ee waxaa daawaneysaa Muqdishadii cusbeyd.
Dad badan ayaa sharciga iyo wadooyinka Muqdisho ee Booliska iyo Taraafikada kala hagayaan ay la yaab ku noqotay, halka dhalinyarada qaarkood ay ugub ku tahay iney arkaan nidaamka cusub ee Muqdisho ka hirgalay oo aysan horay u soo arkin ama dagaaladii iyo burburkii kusoo dhex koray.
Tan aad la fajaceyso ee lagu farxo ayaa ah muuqaalka hoose ee Video-ga oo Wariye tegay Muqdisho ka diyaariyay horumarka dhinaca ganacsiga iyo qaab cusub oo dadka ay ku iibsanayaan alaabaha daruuriga ah E-Cash oo ah qaab ku cusub dalka, waxayna dadka alaabahooda ku iibsanayaan E-Cash-ka oo Taleefanka Mobile-kaada aad wax walbo ku gadaneyso iyadoo dadka aysan wax lacag ah gacanta ku qaadaneyn.
Labo Wadan oo isku heysta qofka ugu da’da weyn Caalamka & muran Xoogan arinkaasi ka taagan(Daawo Sawirada)